Ngaphezulu kweeplagi ezingama-35 kunye neefilitha zeFotohop mahala | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngaphezulu kwama-35 iifowuni zeefotohop kunye neefilitha
Lola ifani | | Photoshop, Izibonelelo, Tutorials
Namhlanje sinemithombo emininzi esinokuyifumana Iifilitha ze Photoshop kunye neeplagiUyilo olungxamisekileyo kunye nenkqubo yokuhlela ifoto. Kwiminyaka embalwa edlulileyo besinakho nokufikelela ngokulula kwezi ntlobo zezixhobo zinokunceda umsebenzi wabathengi, nangona ukuthetha inyani le repertoire ibingabanzi njengangoku.
Ezi plugins ezingama-40 kunye neefilitha zeFotohop Uya kufumana kwakhona uthotho lwezenzo ukugxininisa imisebenzi ethile, ubaleke uyilo oluthile kwaye uphumle ngelixa ujonge kweminye imisebenzi enokuthatha ixesha elide. Uthotho lwezixhobo ezifanelekileyo zenkqubo ethe yatshintsha uyilo kunye nokufakwa kwakhona kweefoto kakhulu kumashumi eminyaka akutshanje.
Ezinye zeekhonkco ziya kukusa kukhuphelo lwezenzo, ezithi inokulayishwa kwiFotohop kwifestile enye. Sijonge "iZenzo zokulayisha" nakwifayile ye-zip esiyikhuphelileyo, siyifumana indawo yayo ukuze siyilayishe kwiFotohop. Kuya kufuneka uvule umfanekiso kuphela ukufaka isenzo kwifestile efanayo. Ukwenzela i kusetyenzwa ngaphambili, sikushiya a Isifundo esichaza indlela yokuzifaka kwi-Photoshop nakwi-Lightroom.
Izifundo ezingama-80 zokufundisa ngefotohop
1 Isifundo: Ungazifaka njani ii-presets kwi-Photoshop nakwi-Lightroom
1.1 Faka ii-presets kwi-Photoshop
1.2 Faka ukuseta kwangaphambili kwiLightroom
2 Iifowuni kunye neefilitha zamahala zeFotohop
2.1 Ulawulo loLuhlu
2.2 Idrama yeSepia
2.3 Ifoto endala
2.4 Isenzo seVintage
2.5 Isenzo seLithprint
2.6 Iziphumo ze-ON1
2.7 Sika kwaye Ndicande
2.14 Uluhlu lweVelositey
2.15 Ingqokelela yeGoogle Nik
2.17 Iziphumo zeHalftone Photo
2.18 Isiphumo seSangqa seVintage yasimahla
2.19 Ifilimu endala
2.20 Iphupha elibi
2.22 Ukuvuza kweVintage
2.23 Uthuli lwasentlango
2.24 Inkungu yehlobo
2.25 Ngokuhlwa okuluhlaza okwesibhakabhaka
2.26 Emva kwemini eyiHazzy
2.27 Wanga ilanga
2.28 Isenzo se-HDR
2.29 Iziphumo zeHDR ezinamandla
2.30 Umahluko omfusa
2.31 Isenzo sikaBella
2.32 Iintshukumo zombala weFotohop
2.33 Ukulungiswa komnqamlezo ATN
2.34 Ukuqhutywa komnqamlezo
2.35 2-umcu Technicolor
2.36 Ukuyeka ngokukhawuleza
3 Zithini iifilitha zeFotohop?
Isifundo: uyifaka njani kusetyenzwa ngaphambili kwi-Photoshop kunye ne-Lightroom
Faka kusetyenzwa ngaphambili kwiFotohop
Kwimeko ye-Photoshop kukho amathuba amabini: ukuba ifoto ikwiRAW okanye iJPG. Ukuba mnye RAW ifayile Iya kuvulwa ngokuzenzekelayo kwiKhamera eluhlaza yeFotohop. Ukuba mnye JPG Kuya kufuneka uvule ifoto kwi-Photoshop, yiya ku "coca ulwelo", "icebo lokucoca ulwelo eluhlaza".
Nje ukuba sikwiKhamera eluhlaza siza kuya kuyo "Cwangcisa kwangaphambili" kwaye siya kuyinika i "amanqaku amathathu" evula ezinye iinketho zangaphambili (iisimboli zikhombe kumfanekiso ongentla). Kwimenyu yokuhla ezantsi siza kukhetha ukungenisa iiprofayili kunye nokucwangciswa kwangaphambili. Okokugqibela, jonga kwifolda ye preset ufuna ukufaka. Oku kubalulekile, kuhlobo lwamva nje lweKhamera eluhlaza ayikuvumeli ukuba ungenise useto ngqo kwifomathi ye-xmp, tKuya kufuneka ungenise zip, ifayile ecinezelweyo.
Faka kusetyenzwa ngaphambili kwiLightroom
Faka kusetyenzwa ngaphambili Ilula kakhulu, nawe unethuba lokuba ukuba uzifaka kuqala kwi-Lightroom ziya kulungelelanisa ngokuzenzekelayo ne-Photoshop. Siza kuqala ngokuvula ifoto kwaye siye kwiphaneli "Cwangcisa kwangaphambili". Cofa kwi "amanqaku amathathu" ukufikelela kukhetho oluninzi uze ukhethe "Ngenisa kwangaphambili". Kule meko ukuba ungangenisa ngaphakathi ngqo i-xmp.
Iifowuni kunye neefilitha zamahala zeFotohop
Ulawulo loLuhlu 2 Yiyo ulwandiso lwasimahla iyahambelana neAdobe Photoshop CC kunye neCC 2014. Le iplagi ivumela ukwenza izinto ezithile ngokuzenzekelayo ukuba, nangona zisisiseko, ukuba ubungenayo kuyakufuneka ukuba uzibeke ungqimba ngobungqongqo, ngelixa uLawulo loLuhlu 2 ungafaka utshintsho kulwahlulo olunye ngaxeshanye I-hoot yokwenyani ukuba ufuna ukugcina ixesha!
Yintoni onokuyenza ngoLuhlu loLawulo 2?
Qamba igama kwakhona iileya kunye neefolda
Susa iziphumo ezingasetyenziswanga kuzo zonke iindawo ezikhethiweyo
Gcwalisa ifuthe lezinto zonke ezikhethiweyo
Cima zonke iileyili ezingenanto
Hlaziya izinto ezintle
Fumana iifayile kunye neefolda ezinamagama afanayo
Guqula zonke izinto ezikhethiweyo zibe zizinto ezifanelekileyo
Isifundo: Yenza, Zenzekelayo, kwaye ugcine iZenzo kwiFotohop
Idrama yeSepia Isisihluzo sasimahla, ilungele ukunika ukubamba kweediliya kunye nenhle kwiifoto zakho. I "sepia" yimpembelelo yeklasikhi, kodwa oku kucoca kuya kukuvumela ukuba unike indawo eyahlukileyo kwimifanekiso yakho, hayi ukufezekisa kuphela iithowuni ezinesonka ukubonelela "ngomdlalo" othile enkosi kwinqanaba lokwahluka.
Ukuthetha ngeefilitha eziza kukuvumela ukuba ubambe iifoto zakho, Isenzo esidala seFoto Yiyo ukhetho olukhulu lokuzisa isiseko se-retro kwindalo yakho Kwaye simahla simahla!
Esi sihluzo sasimahla siya kukunceda unike iifoto zakho a ukujonga okungathandekiyo kunye nokuthandana. Isenzo seVintage kulingisa umphumo wombala kunye Iimpawu zeekhamera ezindala yokufota, ewe, oomatshini abadumileyo bePolaroid ngoku abanemfashini!
Isenzo seLihtprint sisihluzo sasimahla esilingisa ifayile ye- ukuprinta kweekhamera zokuqala, kangangokuba xa isetyenziswe kwifoto ijongeka njengomfanekiso wokwenene ovela kwixesha elidlulileyo, unokuzikhuphelela simahla!
I-ON1 yinkampani yophuhliso isoftware yabafoti Ngeminyaka yamava kwicandelo, kugxilwe ekunikezeleni ngezixhobo zeefoto zobungcali kunye neamateur ukuhlela nokufumana okuninzi kwimifanekiso yabo.
Iziphumo ze-ON1 2021 Yiyo Faka iplagi iphuhliswe yinkampani, iyahambelana neMac kunye neWindows, yona kukuvumela ukongeza amakhulu ezitayile kunye nefuthe kwiifoto zakhos, kukusondeza kwiziphumo zobungcali obuphezulu ngaphandle kwesidingo sokuchitha ixesha elininzi uhlela. Zonke iifilitha zikhethwe liqela le-ON1, ngokusekwe kuhlalutyo lomzi mveliso wokufota, ukufuna ubutsha kunye nokuyila.
Inqaku elihle ekuthandeni kukuba iplagi ayisebenzi nje kuphela njenge-Photoshop pluginIyahambelana nezinye iisoftware zoyilo ezinje ngeAdobe Lightroom, Capture One, Affinity Photo okanye Corel Paint Shop Pro, kodwa inokusetyenziswa njengesicelo esizimeleyo.
Ngelishwa Iziphumo ze-ON1 yiplagi ehlawulwayo, nangona kunjalo bakunika ithuba lokonwabela uvavanyo lweentsuku ezili-14 zasimahla, ngaphandle kwesidingo sokubonelela ngeenkcukacha zakho zekhadi letyala kwaye ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokuzibophelela ukuhlala.
Sika kwaye Ndicande
Sika kwaye Ndicande Yiplagi yasimahla ephuhliswe nguDaniel Peruho eya kukuvumela ukuba uhlengahlengise umsebenzi wakho kwiFotohop. Phakathi kwezona zenzo zinamandla zolu kongeza ndibalaselisa Isakhono sokukhetha iqela leendidi kwaye ubaphathe njengento enye okanye uyithumele kwelinye ilizwe njengomfanekiso, kwaye usike iipikseli ezingeyomfuneko.
IiCCS3Ps yiplagi yeAdobe Photoshop leyo ikuvumela ukuba uguqule ngokulula nangokukhawuleza ii-CSS3Ps sheet (Inkqubo yokuguqula yenziwa efini), iplagi efanelekileyo kwabo bajonga umsebenzi wabo kuyilo kunye nokuprinta amaphepha ewebhu. Unga khuphela mahala kwiphepha lakhe lewebhu.
Ukunikezela yifowuni yasimahla yePhotoshop isebenza ngaphandle komthungo kwaye ngesantya esiphezulu ngasemva, ikuvumela ukuba ungeze okwahlukileyo kwizikrini, ulawule iiasethi, iinkcukacha ezichaziweyo zoyilo kwaye uzithumele ngaphandle ngokuzenzekelayo. Ukuba ufuna ukukhuphela le add-on intle kunye nokufikelela kwiinkcukacha ezithe kratya malunga nokuba isebenza njani, ungakwenza oko kuyo iphepha elisemthethweni.
Izikhokelo zibalulekile kuyilo, ngakumbi ukuba ufuna iziphumo zobungcali. Isikhokelo sesikhokelo yiplagi ehambelana neFotohop, iAdobe Xd, iAdobe Illustrator kunye neSketch leyo isusa umsebenzi obuhlungu wokongeza ngesandla izikhokelo kunye neigridi. Nangona ayisiyi-plugin yasimahla, iindleko zelayisensi malunga nee-euro ezingama-6 ngenyanga, uvavanyo lwasimahla lweentsuku ezili-14 lunikezelwa.
Umqambi Yiplagi yasimahla ehambelana neAdobe Photoshop CS5, CS6 kunye neCC. Hlaziya ukudityaniswa kwamanqanaba amaninzi ngonqakrazo olunye lwempuku. Khetha nje izendlalelo okanye amaqela owaguqule kancinane, ukhethe nawuphi na umaleko okanye ukwakheka ofuna ukufaka khona utshintsho, kwaye usebenzise imiyalelo yokuhlaziya iileya ezikhethiweyo. Ngale miyalelo uya kuba nakho ukungqamanisa isitayile somaleko akhethiweyo, i-opacity okanye imo yokudibanisa, uhlaziye indawo yokuma kwezinto ezikhethiweyo kwaye ungqamanisa ukubonakala kwezingqimba.
Getty Images yibhanki yomfanekiso ehloniphekileyo, ikwabonelela nge-plugin yasimahla ehambelana neAdobe Illustrator, InDesign, Photoshop, iPremier Pro kunye neZiphumo zangemva. Ngaphandle kokuphulukana nomgangatho, le add-on izakuvumela ukuba uhambise umsebenzi wakho, ukufikelela kwimifanekiso, imifanekiso kunye neevidiyo ngaphandle kokuphuma kwinkqubo.
ink yi-plugin, ephuhliswe chrometaphore, eyenzelwe amaqela abaphuhlisi abangaqhelananga nesi sixhobo. Le iplagi ikuvumela ukuba ungeze ulwazi olongezelelweyo kuxwebhu lwe-Photoshop kwaye ungayikhuphela simahla kwiwebhusayithi.
Le iplagi yasimahla izakunceda wenze iitemplate (ikakhulu iitemplate zewebhu) kunye iququzelela umsebenzi woyilo, Uluhlu lweVelositey idibanisa izinto ezikrelekrele kunye nezinto ezichazwe kwangaphambili ezikhoyo ukuze uzifake kuxwebhu lwakho.
Ingqokelela yeGoogle Nik
Ingqokelela yeGoogle Nik yenye yeeplagi ezilungileyo zeFotohop. Le iplagi kubandakanya izixhobo ezisi-7 eziluncedo kakhulu ekusebenziseni iziphumo ezipholileyo kunye neefilitha kwiifoto zakho kwaye usebenze ngemifanekiso yoyilo lwakho:
I-Analog Efex Pro: Ukulinganisa ifuthe leekhamera ezindala zeanalog.
Isilivere ye-Efex Pro: isihluzi esimnyama nomhlophe.
Sharpener Pro: ukudlala nenqanaba lobukhali beefoto.
Chaza: ukunciphisa inqanaba lengxolo yomfanekiso.
Ubumnandi: ukudlala ngombala kunye neethoni yemifanekiso.
Umbala we-Efex Pro: Iifilitha zokuguqula kunye nokubuyisa imibala.
I-HDR Efex Pro: yenza iifoto ze-HDR.
Nangona ayisiyi-plugin yasimahla, kwiwebhusayithi ye Ingqokelela yeGoogle Nik unokufikelela kuvavanyo lwasimahla lweentsuku ezingama-30. Kule webhusayithi unokufumana ifayile ye- amakhonkco okukhuphela mahala.
Glitch Yiyo Icebo lokucoca ulwelo olukhululekileyo olulinganisa ukujongwa kweetape zeVHS ezindala, iithoni zombala kunye neentsilelo ezincinci zivelisa isiphumo esifanelekileyo se-retro ukunika ukuchukumisa okwahlukileyo kwimifanekiso yakho.
Iziphumo zeHalftone Photo
Con Iziphumo zeHalftone Photo ungayilingisa imibala kunye ubunjani bemifanekiso eshicilelwe kumaphephandaba. Icebo lokucoca ulusu simahla lukhetho olukhulu kwaye luyilo oluya kunika imifanekiso yakho ubuntu ngonqakrazo olunye.
Isiphumo seSangqa seVintage yasimahla
Isiphumo seVintage Retro Circle Isihluzi esenziwe ngezixhobo zeFotohop eziyilelwe ukunika imifanekiso yakho ukujonga kwakhona, kumnyama nomhlophe kwaye kubhalwe kakhulu, Esi siphumo sikhumbuza iikhamera ezindala kwaye simahla.
Ngecebo lokucoca ifilimu elidala, elihambelana neAdobe Photoshop kunye neLightroom, iifoto zakho ziya kujongeka njengemiboniso ethathwe kwimovie. Ungayikhuphela kule khonkco njengenxalenye yesixa esiquka iziphumo ezingama-20 zizonke.
Iphupha elibi sisihluzo sasimahla seFotohop dlala ngokungafaniyo nemifanekiso ukunika iifoto zakho ithoni emnyama, ngokungathi yayiliphupha elibi.
isilivere Sesinye seefilitha zasimahla endizithanda kakhulu kwiFotohop kunye neFotohop Elements. Guqula iifoto zakho zibe mnyama kwaye zimhlophe kwaye, nangona kunjalo kubonakala ngathi akukho nto intsha, yibhombu kuba ijongeka intle phantse nayiphi na ifoto.
Isihluzi esihambelana neFotohop yazisa ukukhanya kwesibane kwiifoto zakho kunye nothotho lolungelelwaniso ukubanika i Ukuchukumisa iidiliya. Ukuvuza kweVintage Iya kukuvumela ukuba wenze eyona mifanekiso ilungileyo ye-retro kwaye eyona nto intle kukuba ungayikhuphela simahla.
Ngaba uyafuna ukunika ithoni efudumeleyo kunye emnandi kwiifoto zakho? Ngothuli lwasentlango ungayifumana ngokucofa kanye. Esi sihluzo simahla siya kukunceda unike ukukhanya okukhethekileyo kunye nokuyila kakhulu kwiifoto zakho kwiAdobe Photoshop.
Ihlobo laseHaze sisixhobo esifanelekileyo sokuhlela iifoto zakho zasehlotyeni, dlala ngethoni kunye nokukhanya ukwenza isiphumo esitsha nesahlukileyo. Ewe ngokunjalo, yisebenzise kwiifoto zangaphandle, kwiifoto ezimnyama zihlala zingakhange zibonakale zilunge kakhulu.
Ngokuhlwa okuluhlaza okwesibhakabhaka
Ngokuhlwa okuluhlaza okwesibhakabhaka Icebo lokucoca ulwelo, elilungele i Nika iifoto zakho ukubamba okumangalisayo nokungaqondakaliyo. Ukuba ufuna imifanekiso yakho idlulise iyelenqe elithile, khuphela le siphumo simahla kwaye ungathandabuzi ukuzama.
Emva kwemini eyiHazzy
Emva kwemini eyiHazzy sisihluzo osifunayo nika nefuthe elifudumeleyo nelifudumeleyo kwiifoto zakho, Ukudityaniswa kweemaski zemibala eyahlukeneyo kuya kunika imifanekiso yakho ukubamba okumangalisayo. Ungalikhuphela eli cebo ngeFotohop simahla.
Wanga ilanga yipakethe yeefilitha zeAdobe Photoshop ebandakanya zizonke iziphumo ezili-10 ezidlala ngokukhanya Ukutshintsha ngokupheleleyo iifoto zakho Kuyamangalisa! Unokwenza iifoto ezithathiweyo emini zikhangeleka ngathi zithathwe ukutshona kwelanga. Khuphela zonke ezi zihluzo simahla.
Ngamanye amaxesha xa uthatha ifoto siyakhathazeka xa sibona inani elikhulu leenkcukacha ezilahlekileyo ngenxa yokulahleka rhoqo kokungafani. Isenzo se-HDR, kubandakanya amanyathelo ama-4 (yoqobo, ukukhanya, eqhelekileyo kunye nobunzima) ukuze ukwazi fumana kwakhona iinkcukacha kunye nemibala yemifanekiso yakho Iziphumo ziyamangalisa!
Iziphumo zeHDR ezinamandla
Ungafezekisa iziphumo ezifanayo ngesi sihluzo sasimahla, ukhuphele kwaye ubuye kwakhona Iziphumo zeHDR ezinamandla ububanzi beethoni kwimifanekiso yakho. Ezi ntlobo zohlengahlengiso ziya kuthatha iifoto zakho ziye kwelinye inqanaba.
Ukuba ufuna ukunika iifoto zakho umnxeba wothando, esi sisihluzo osifunayo. Umahluko omfusa Yiyo ukusebenza simahla kwi-Adobe Photoshop enika imifanekiso yakho a I-violet kunye nepinki ithoni, Ukudlala ngokuchaseneyo ukuze ufumane iziphumo ezizodwa.
Isenzo sikaBella Isisihluzi esifanelekileyo ukuhlela iifoto zakho zonxibelelwano lwasentlalweni. Esi siphumo simahla siyahambelana neAdobe Photoshop isebenza kakuhle kwimizobo enemibala emininzi, kwaye yenza imifanekiso yakho ibe nomtsalane ngakumbi Yizame!
Iintshukumo zombala weFotohop
Iintshukumo zombala weFotohop Yiyo Iphepha lesiphumo simahla seFotohop Oko kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo zeefilitha ezimnandi zokusebenza neefoto zakho. Iphakheji ibandakanya amanyathelo ali-12 ewonke:
Uyolo (12): Iziphumo zekhamera yePolaroid
Intwasahlobo (11): ubumenyemenye obuluhlaza
Ihlobo (10): Inika ithoni efudumeleyo kwimifanekiso yakho, ngokungathi ibiyifoto ethathwe ehlotyeni
Ukuphupha (9): Esi sihluzo sonyusa umahluko weefoto zakho.
Ibhlitshi ethambileyo (8): khanyisa kwaye mhlophe ithoni yemifanekiso yakho
Uguqulwe uMary Blu (7): Icebo lokucoca eluhlaza kwimifanekiso yakho
UMariya oguqukileyo (6): nika ithoni ebluish kwimifanekiso yakho, yisebenzise kwimifanekiso eqingqiweyo kwaye uya kubona ukuba iziphumo zikukhumbuza njani ngobugcisa be pop.
Iingcali zeBW zoBuchule (5): Guqula iifoto zakho zimnyama zimhlophe kwaye ungeze iinkozo kunye nokuthungwa, yeyona nto ndiyithandayo.
Ubungcali BW (4): Esi siphumo sifana kakhulu nesangaphambili, sisebenzise xa iinkozo zibonakala zigqithile.
Imayile engekhoyo (3): ngokwahlukileyo, yongeza iithowuni eziluhlaza kwimifanekiso yakho
Uthando olunzima (2): Yongeza umphumo wepinki kulusu kwaye wandise umahluko womfanekiso.
Uthando oluthambileyo (1): Iziphumo ezifanayo nezangaphambili, kodwa ngokudibanisa ukukhanya, ngokungafaniyo kancinci kunye nokuthamba okungakumbi.
Ukulungiswa komnqamlezo ATN
Esi siphumo elinganisa ukukhula kweefoto zakudala ngemichiza, isiphumo sinefoto enefuthe elithile lombala, ngokuchaseneyo okuphezulu kunye nokugcwala. Ukuba ulilancholic yokufota nge-analog, awunyanzelekanga ukuba ubuyele kwifilimu, ukhuphele simahla Ukulungiswa komnqamlezo ATN yeFotohop kwaye usebenzise olu seto kwifoto yakho yedijithali.
Umphumo ofanayo oya kufumana nawo Ukuqhutywa komnqamlezo, esinye isihluzo sasimahla iyahambelana neAdobe Photoshop kunye neLightroom.
Izenzo ezi-2 kule pakethi ziguqula imibala yeefoto zakho zibe linganisa inkqubo ye-2-strip Technicolor ithandwa kakhulu kwimiboniso bhanyabhanya ngexesha le-20 kunye ne-30. Eyona nto ilunge kakhulu, yenza izingqimba ezintsha ukuze ingatshabalalisi umfanekiso wakho wokuqala. Unokuzikhuphelela 2-umcu Technicolor yeFotohop simahla!
Isenzo esinzima seLomo sebenzisa umphumo onomdla kakhulu kwimifanekiso yakho, isebenza kakuhle kwiifoto. Nika iifoto a I-retro kunye ne-vintage touch super enomtsalane. Iyahambelana neFotohop kwaye unokuyikhuphela simahla.
Zithini iifilitha zeFotohop?
Iifilitha ze Photoshop Zizixhobo ezithandekayo zokufaka iifoto zethu kwakhona okanye ubabonelele ngeziphumo zokubanika ukubonwa okukhethekileyo.
Sebenzisa iifilitha kwiFotohop ukongeza kwenza umsebenzi ube lula ngakumbi njengoko beza ngaphambili kwaye kufuneka sizisebenzise kwifoto okanye kwindawo ethile kuyo, sisindisa wonke loo msebenzi wokumisela de sifumane iziphumo esizifunayo.
Ukufikelela Iifilitha ze Photoshop mahala sicebisile kolu luqokelelo kufuneka uzifakele kwaye emva koko ziya kubonakala ngokuzenzekelayo ezantsi kwemenyu yeFilitha yenkqubo yeAdobe.
Ngaba uyazi iindawo ezingakumbi apho khuphela iifilitha zeFotohop? Sishiyele uluvo kwaye ucebise abo ubasebenzisa kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Ngaphezulu kwama-35 iifowuni zeefotohop kunye neefilitha
njengoko iplagi okanye icebo lokucoca ulwelo libizwa ukuba lisuse oluhlaza, njengoko kubonisiwe kumfanekiso
hahaha ukubuza ilayisensi ...
molo ezinye iiplagini ukwenza isiphumo sentliziyo ngeefoto
UFelipe Tapi sitsho
Phendula uFelipe Tapi
Ndifuna iiplagi zokuprinta ngaphezulu kwesithombe esinye kwiphepha ngalinye kuba ndingaboni seti yemifanekiso. Ndiyidinga ngokungxamisekileyo enkosi.
Ewe zeziphi izihluzi ezilungileyo
UJaume deu sitsho
Ndenza i-landscape, ubusuku, indalo kunye nokufota okukhulu kwaye ndingathanda ukuba neeplagi okanye iifilitha ukuze ndikwazi ukuphucula imifanekiso yam simahla
Phendula kuJaume Deu
Ayizukuvumela ukuba ndikhuphele nayiphi na
Uyenza njani ibhanna yeYouTube kwiCanva, inyathelo ngenyathelo
Ungazifaka njani iifilitha ezikwi-Photoshop